आज, लेट वितरण तीस-पाँच वर्ष पछि पहिलो जन्म भनिन्छ। तर अब पहिलो पटक जन्म दिन जो बीस-पाँच बालिका, मा चुपके तिनीहरूलाई starorodyaschimi कल askance पुरानो सुडेनी नजर। यी STEREOTYPES कहाँ छन्?
पुरातन संसारमा बीस वर्ष जन्म दिन आदर्श थियो। अन्यथा महिला अद्वितीय हारे श्रेणी मा गिरावट। त्यो समय मा भएको बच्चाहरु को मुख्य उद्देश्य सैनिकहरु को भर्ती थियो किनभने तिनीहरूले, सार्वजनिक गाली धम्की - कुनै बच्चा, एक महिला यस्तो देखि राज्य कुनै लाभ। मध्य युग मा स्थिति धेरै द्वारा सुधार भएको छ - यो बालिका पनि प्रारम्भिक विवाह र गर्भनिरोधक बारेमा त्यसपछि मात्र सेक्स को पहिलो लाग्यो जो, र एक धेरै पुरानो साथी, को लागि।
यसको bedrock नैतिकता बीच सोभियत शक्ति यहाँ, आश्चर्यजनक पनि बाहिर खडा। बच्चालाई संग पहिलो महिला को बीस-पाँच वर्ष पहिले नै यो "लज्जास्पद" श्रेणी मा पर्छ। यो परिभाषा starorodyaschimi मा लगभग तिनीहरूले सकेजति कुनै पनि तरिकामा सहन धेरै महिला प्रतिनिधिको छोडेर, एक spinster राशि।
आँधी सत्तर, पक्कै पनि पश्चिमी हावा मा पोस्ट-सोभियत देशहरुमा ल्याए। युरोप मा, पहिलो जन्म निरंतर तीस चिन्ह लागि, आमा को उमेर को निन्दा मा indulged छैन "क्रस" छ। विपरीत मा, पछि पुस्तामा परिपक्वता को एक चिन्ह रूपमा देखेको थिए, समाजमा एक निश्चित स्थिति, परिवारमा एक स्थिर आय, र यति मा, राम्रो तरिकाले, फुरतीला 90-को यो सिर्फ ध्यान छैन तिर्न गर्नुभयो, किनभने एक्लै गरौं पाउनु भएको छ। डी यो स्थिति चाँडै संघ मा कथित पर्याप्त हुनेछ महिला मातृत्व एक निश्चित अवधिको लागि धक्का, झन् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण बन्ने। पनि त, 45 वर्ष को पुस्तामा असामान्य कुरा कथित छैन। अब मामा फोरम या त एक गर्भावस्था योजना वा आफ्ना छोराछोरीलाई colic छलफल गर्दै छन् जो महिलाहरु उमेर चालीस वर्ष, यति पूर्ण। यो प्रवृत्ति पछि पुस्तामा रूपमा मानवता को सुन्दर आधा एक सचेत विकल्प रूपमा लोकप्रिय छैनन् भनेर देखाउँछ। र यो उमेर मा प्रजनन दर कम छैन।
यो पनि उल्लेख लायक छ कि नकारात्मक क्षणमा कहिलेकाहीं लेट वितरण एक विकल्प महिलाहरु, र यो मौका को प्रकारको हुन्छ। युवा को, वा अघि गर्भ धारण गर्न असमर्थ अन्य कारण गल्ती लागि तिर्ने, महिला आफ्नो सफाई व्यस्त छन् प्रजनन प्रणाली चालीस को उमेर बारेमा, र त्यसपछि वितरण समय छान्ने को प्रश्न छैन यो मूल्य हो - ढिलो राम्रो।
वित्तीय अवस्था वा बच्चा एउटा सामान्य इच्छा को remarriage सुधार - यो लेट वितरण को एकदम बुझ्ने कारक हो। यस मामला मा, पछि पुस्तामा पनि असामान्य छैनन् - धेरै जोडे अब यस्तो कार्यहरू लागि हल छन्। र तिनीहरूलाई लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, शो व्यापार, व्यवसाय स्त्रीको तारा।
डाक्टर ambiguously लेट प्रसब अनुमान। एक हात मा, आमा को स्वास्थ्य को सबैभन्दा लेट वितरण पक्षमा बोल्न छैन - चालीस को उमेर गर्न एक महिला gynecological असामान्यताहरु को बस एक गुच्छा को एक इतिहास accumulates, तर पनि मन, excretory र पाचन प्रणाली को असामान्यताहरु। यो कारक सधैं गर्भावस्था र प्रसब बेला बच्चा र आमा को स्वास्थ्य को स्थिति को स्वास्थ्य प्रतिक्रिया छ। अर्कोतर्फ, लेट प्रसब यो पर्याप्त एक बच्चा, प्राथमिक कुराहरूमा सुरक्षित छैन, बच्चालाई आध्यात्मिक आवश्यकता प्रदान हुर्काउन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई आत्मविश्वास धेरै मेरो आमा दिनुहोस्। को पोपको लागि सामान्यतया लेट वितरण - - पूर्ण आफ्नो पितृत्व महसुस एउटा ठूलो मौका रूपमा एक विशाल प्लस यहाँ बच्चा पिता को वृद्धि जिम्मेवारी थपिएको छ।
लेट वितरण लागि जे कारण, आमा साठी उनको साथ को उमेर मा भनेर बुझ्न पर्छ वास्तवमा, पनि हुनेछ, एक विशाल सहयोगको आवश्यक जो एक किशोरी। यसैबीच, सहयोग आमाबाबुले द्वारा आवश्यक हुन सक्छ। सत्तरी को उमेर मा रेकर्ड हालैको पुस्तामा, तर यो आवश्यक छ कि छैन भनेर एक्लै हुन एक बच्चा निन्दा गर्ने?
गाढा लेबिया: सम्भव कारण र उपचार को विशेषताहरु
6 दिन ढिलाइ परीक्षण नकारात्मक हो: कारणहरू
विशेषताहरु र माउन्ट VESUVIUS को इतिहास
चिनियाँ कुकुर ठूलो र सानो, गंजा र कपाल। चिनियाँ चूंगचींग कुकुर (फोटो)
तीव्र रेफ्रिजरेटर: निर्माता, मोडेल समीक्षा
सस्तो र प्रभावकारी - Alcantara को मद्दतले आफ्नै हातले कार भित्री को padding
Hornblende: गुणहरू, संरचना र आवेदन